Qormadii koowaad ee qoraalkii: ” Baaritaan Kooban!” | WHEELIYE.COM
Qormadii koowaad ee qoraalkii: ” Baaritaan Kooban!”
Tan iyo markii la uumay Nabi Aadam nabad gelyo korkiisa ha ahaatee iyo Xaawo dadku waxa uu ahaay lamaanayaal nolosha wadaaga. Taas oo ah tan suurto gelisay in bilaayiinta bini aadamka ah ee dunida soo martay iyo kuwa nooliba uunmaan, sidaas daraadeed ayuu guurku yahay wax lagama maarman u ah nolosha iyo jiritanaka dadka.
Dadyowga kala duwan ee dunida dacaladeeda joogaahi waa isku waafaqsan yihiin jiritaanka lamaanaha haba ku kala duwanaadaan ujeedada iyo aragtida laga leeyahaye.
Hadal haan ma buuxshee hadii aan u soo laabto tan islamku ka leeyahay oo ah inta naga quseysa ayaa waxa ka mid ah xifdinta iyo dhowrista nafta taa oo loola jeedo in la daboolo baahida ay labada jinsi isu qabaan si sharciga waafaqsan. Iyo in aanuu bini aadamku dabar go´in taana guurka loo maro. Sidoo kale guurku waa wadadii ama sunadii nabiyada CSW oo ah wax wanaagsan, inla helo ilmo anfaca qofka iyo in uu ku noolado nolol ay la wadaagto dhigiisa aysan kala maarmin oo raxmad iyo isu hilow ilaah dhexdhigay hadii ay wadadiisa ku toosnaadaan. Iyo inkale oo aanan halkaan ku soo kobi karin oo guurka diinta islamku ka leeyahay.
Hadaba anaga oo ah umad muslim ah, ayaa hadana waxaa la is weydiinayaa waa maxay sababta ay qoysaska soomaaliyeed gaar ahana kuwa qurbaha joogaa uga burburi ogyihiin kuwa kale marka la barbardhigo?! Si aan jawaabta isku meel dhigno ayaan qormadaan oo ah baaritan si kooban looga ku soo uruuriyay dadka soo bandhigi doonaa
Shaki kuma jiro qaran jabkii Soomaaliya ka dhacay in uu qeyb libaax ka qaatay si dadban iyo sitoos ah intaba dhibaatada heysata lamaanayaasha qurba joogtaa iyo ubadkoodaba. Dhaqankii hore ee soomaalidu waxuu ku tusayaa in furiinku ahaay ceeb iyo wax laga gaargaarsado ama laga warwareego.
Tusaale nin ay xaaskiisu ku xumaatay ayaa rag kula taliyeen in uu iska furo, ninkii ayaa ugu jawaabay erayo koobnay hasa yeeshee macno ku qotomay kuwaas oo kedib isu bedelay mahmaah, waxa uuna yiri ” Iyana ilmada ha iga dhameyso ana aan ilmaha ka dhameeyo” Hadalkaas oo kutusaya dulqaadka iyo sida ay ugu adkeyd inuu furo xaaska saas u dhibaateyn jirtay, oo leeyahay ilmada ayaan qubayaa markii aan furi lahaay. Dumar badan ayaa ayana u gegsan jiray rag aad u qalafsanaay. Sida gabadhii caanka ku noqotay xigmadii ninkeedu garan waayay wax uu ugu abaalgudo. Taas oo ayana tusineysay sida labada lamaane ee soomaalidi hore isugu dulqaadan jireen oo ay aad ula xumeyn in ay isfuraan. Ninka qabay gabadhan ayaa asna waxa uu ahaay nin aad u xanaaq badan oo had iyo jeer xaaskiisa u gacan qaada. Habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa u soo martiyay gabadha aabbeheed iyo walalkeed. Waa caadadiisiiye ayaga oo ku mashquulsan sooryeynta xididka iyo dadka xilka ka mudan ee ah waalidka iyo walaalka xaaskiisa ayuu gabadhii dharbaaxay. Dhacddaan oo dhacday xili aad xasaasi u ah ayeey gabadhii ugu jawaabtay ” caana waaye saca ha dilin” Taas oo ay ugu muujineysay aabbeheed iyo walaalkeed dhawaaqa ama codka dharbaaxda lagu duftay in ay tahay ul u ninkeedu ku dhuftay sac ee aan ayada wax lagu dhufan! Ninkii ayaa ku sheekeeyay in gacantiisa mar kale aysan ku dhicin xaskiisii!
Hadaba raga iyo dumarka jooga ninkaas iyo haweeneydaas ma noqon karayaan! Taas waxaa aan ugu soo tusaale qaatay sidii beri hore xaalku ahaan jiray iyo sida maantay jirta. Sidii aan horayba uga dhawaa jiray qaranjabkii Soomaaliya qeyb ayuu ku leeyahay qoys burburka ku habsaday reera badan oo soomaaliyeed. Burburka ay sababeen ilaha dhaqaale iyo kuloolanka xaga maamulka reerka. Aqoon la’aanta oo labada lamaane ama midkood ay jaahil ka yihiin waxa uu yahay qoyska micnihiisa iyo xuquuqda iyo waajibaadka qofka u yaal ama lagu leeyahay. In xuquuqda lamaahan laga hormariyo xuquuqda dad kale ama loo weeciyo cidkale. Sida in uu lamaanuhu ka doorbido nolosha iyo wada noolanshaha lamaanaha kale asoo u dacwooda walaalkiis/walaashiis ama walaalkeed/walaasheed. Iyo munkarka oo aan la iska reebin macruufkana la isfarin.
Si aan u helo jawaab macquul ah oo noo ifisa halka wax ka qaldanyihiin ayaan suaashan soo bandhignay, waa ceynkee qofka aad jeceshahay in aad nolosha la wadaagto? Aqristow waxa ay ragga iyo dumarku si isku mida kuugu sheegaayaan in ay doonayaan wiil ama gabar wadaad ah oo wanaagsan oo ay nolosha la wadaagaan.
jawaabtaas ayaa waxaa ka dhashay suaal kale oo ah wiil wanaagsan ama gabar wanaagsan waa ceynkee seed u aragtaa oo aad u suureyn kartaa? Jawaabaha ay arinkaas ka bixiyeen ayaa ah kuwo aad iyo aad u kala duwan. Waxa aan aaminsanahay in hadii ay raga iyo dumarku isla meel dhigaan waxa uu yahay wiil wanaagsan ama gabar wanaagsan in wax badan oo dhibaato ah laga gudbi lahaa. Waxa aan idiin so koobayaa aragtiyadii iyo jawaabihii kala duwanaay. Wiil ayaa yiri
” Aniga aragtideyda gabar wadaad ah waa tii weysada aan ka weecan, warkeygana yeesha” Gabar ayaa ayana tiri:” wiil wadaada waa wiilkii wehel ii ah, war idhiba iyo wax yeelo iga dhowra, wadada ilaha igu waaniya, waalidkey xariiriya, wareegto inta soosaara waxaas yeel ugu oran!” Hadaba hadii labadaan qof aan eegno jawaabahooda waxaa aad ka dheehan kartaa in uu jiro farqi oo ah yaa leh maamulka iyo awooda, oo yaa reerka u ah madax? Waayoo gabadhii waxa ay leedahay wiil wanaagsan oo wadaad ah waa mid aan wareegto inta soo saara aan warkeyga yeel igu dhihin, halka wiilkiina leeyahay waa in ay warkeyga yeesho gabadha wanaagsan ee wadaada ah.
Aqristayaal inta aanan usbuucyada danbe qormo ceynkaana soo gudbin, ina soo siiya aragtidiina guud ee qormadaan “Baaritaan koban” la magac baxday ku aadan. Mahadsanidiin.
qore Mohamed Boolow
« MAQAAL DIINI AH OO KA WARAMAYA “ADUUNKA AMA KOWNKA” Tafsiirka Sh. Maxamed Macalin Xasan »